Iwe unoedza sei imwe alternator?
Kutanga injini, iyo injini ichimhanya, bvisa chero bhatiri tambo. Inofanira kuramba ichimhanya, kana zvisiri, inogona yakaipa yakaipa kuchaja system. Usambofa wakatanura tambo yebhatiri iyo injini ichimhanya.
Unoziva sei kuti alternator yakaipa kana bhandi?
Ndeimwe alternator inokanganiswa nemamiriro ekunze anotonhora?
Kazhinji ndaiti kwete, chinhu chega chinoitika mabrashi kana chibvumirano chebhearing uye chinogona kutenderera zvakati omei asi kunze kwekunge chakashata, chinomiririra chinotomira kupisa. Ndosaka paine fanika reza kumberi kuitira kuti vekunze vatonhorere.
Chii chinoita kuti mumwe wako achinje?
Imwe alternator inodzosera bhatiri remota yako.
Chii chinonzi alternator?
Alternator mudziyo uri muinjini yemotokari unogadzira magetsi. Inowanzo kuwanikwa yakavharidzirwa kune injini block uye inotungamirirwa negungano rebhanhire.